Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha |Warshada Waxsoosaarka Shiinaha
Nidaamka Tusaha Xamuulka Badbaadada ah (SLI) waxaa loo qaabeeyey si uu u bixiyo macluumaadka muhiimka ah ee looga baahan yahay in lagu shaqeeyo mashiinka gudaha cabbirkiisa naqshadeynta.Waxa lagu dabaqay agabka ilaalinta badbaadada ee mashiinada kor u qaadista nooca kor u kaca ah.
RC-WJ01 Tusiyaha culeyska badbaadada leh ee qodista
Qodista LMI waa aalad badbaado.Miisaanka, dhererka, iyo raadiyaha ayaa la soo bandhigi karaa wakhtiga dhabta ah.Ka hortagga shilalka ka dhasha culeyska xad-dhaafka ah ee qodista.
RC-200 Tusiyaha Culayska Badbaadada ah ee Crawler Crane
SLI waa gargaar hawleed oo ka digaya hawlwadeenka wiishka inuu ku soo wajahan yahay xaaladaha culayska xad dhaafka ah ee sababi kara burbur qalabka iyo shaqaalaha.Qalabku maaha, mana noqon doono, beddelka go'aaminta hawl-wadeenka wanaagsan, waayo-aragnimada iyo isticmaalka hababka badbaadada leh ee wiishka hawlgalka.
RC-30 Nooca tiirka xamuulka
Dareemuhu wuxuu ku habboon yahay sibidhka, miisaanka madal iyo nidaamyada kale ee cabbiraadda iswada ee warshadaha ee cabbiraadda miisaanka.Xasilooni dhamaystiran oo adag iyo xidhidh dhismeed wanaagsan.
RC-07 Dareemka qulqulka firfircoonida leh
Dareemka culeyska qulqulka waa qalab cabbiraadda saxda ah ee lagu cabbirayo wareegyada kala duwan, xawaaraha iyo awoodda farsamada.Inta badan loo isticmaalo: 1. Ogaanshaha wareegga wax soo saarka iyo awoodda qalabka korantada ee wareegta sida matoorada korontada, matoorada, iyo matoorada gubashada gudaha;2. Ogow qulqulka iyo awoodda marawaxada, bamka biyaha, sanduuqa gear-ka, iyo wiishka qulqulka;3. Ogaanshaha qulqulka iyo awooda tareennada marawaxadaha, baabuurta, cagafyada, diyaaradaha, maraakiibta, iyo makiinadaha macdanta;4. Waxaa loo isticmaali karaa...
Badbaadada Salaanka Crane Tower, Mobile Crane Qatar, Nidaamka Isku dhaca Kahortagga ee Wiishka Tower, Tusiyaha Dakhliga Load Crane Tower, Tusiyaha daqiiqada Load, Shuruudaha Badbaadada Crane Tower,